Buug uu qoray Admiral Faarax Qare oo maanta lasoo bandhigay – Radio Muqdisho
Buug uu qoray Admiral Faarax Qare oo maanta lasoo bandhigay
Munaasabadaan oo aheyd mid lagu shaacinayay buug loogu magac daray (wallee waa waaya arag),oo uu qoray Admiral Gaas faarax Axmed Cumar (Faarax Qare) ayaa lagu soo bandhigay xarunta dhexe ee jamacada xamar ee magaalada Muqdisho.
Xafladaani waxaa ka soo qeybgalay mudanayaal ka tirsan barlamaanka Soomaaliya,siyaasiyiin,saraakiil ciidan,aqoonyahano,qaar kamid ah madaxda Jaamacadaha dalka,iyo arday goobta lagu casuumay,
Ugu horeyn Admiral Gaas Faarax Axmed Cumar ayaa faafaahin kabixyay sababta kadambeeysa in buugaan loogu magacdaro(wallee waa waaya arag),waxa uuna tilmaamay in dhacdooyin badan oo uu goob joog u ahaa kadib uu maskaxdiisa ka yimid buugaan.
Xildhibaan C/laahi Sheekh Ismaaciil oo munaasabadaan soo afmeeray ayaa u Mahad celiyay Admiral Farax Qare oo qoray buugan,waxuuna dhinaca kale bulshada kula dardaarmay iney aqriyaan cilmiga ku qoran buugan.
Gebagabadii munaasabada buuga lagu soo bandhigayay ayaa waxaa dhowr nuqul oo buuga ah la kala gudoonsiiyay qeybaha bulshada shaqsiyaad metelayay.
Buugan ayaa waxa uu ka koobanyahay afar fasal oo kala ah dadka iyo deegaanka ,dhalashadiisa,50 kii ilaa 60 kii ,iyo taariikhda hogaamiye-yaashii dalka soomaray,
Ganacsatada degmada X/weyne oo gudi maamul ah sameystay ” SAWIRO”